Xildhibaan Fiqi “Kalsooni weyn ayaan ku qabnaa guddiga soo diyaariyay Sharciga Doorashooyinka” – Kalfadhi
Xildhibaan Axmed Maclim Fiqi oo ka tirsan golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in Golaha Shacabka doorkooda keliya uu yahay in ay ansixiyaan sharci balse aysan iyaga u yaallin in dalka ay ka dhacdo doorasho Qof iyo Cod ah, sida uu hadalka u dhigay.
Xildhibaanka ayaa sheegay in Baarlamaanka uu ansixiyay Sharciga Batroolka iyaga oo aan oggeyn halka batroolka uu ku jiro. Waxaa uu sidoo kale uu sheegay in kalsooni weyn ay ku qabaan guddiga soo diyaariyay sharciga doorashooyinka.
“Sharciga Doorashooyinka Qaranka oo aqriskii kama danbayska ahaa la hor keenay golaha shacabka, ka dib markii qodobada qaarkood dareen laga muujiyey dib u siiqeyn lagu sameeyey ayaa cod aqlabiyad lagu ansixiyey”
“Waa guul taariikhi ah In dalku qaaday wadadii dimuqraadiyadda muddo 50 sano ah ka dib, anigoo rajaynayaa jn aqalka sarena uu soo ansixin doono ka dibna madaxweynuhu uu saxiixi doono si uu dhaqangal u noqdo” ayuu yiri xildhibaanka.
Kulanka Golaha oo uu shir guddoominayay shalay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayna goob joog ka ahaayeen ku-xigeennada Koowaad iyo labaad ee Golaha ayaa dood dheer kaddib waxa ay Xildhibaannadu akhrinta 3-aad marsiiyeen Hindise Sharciyeedka Doorashooyinka Qaranka.
“Sharciga Doorashooyinka Qaranka waxaa ogol u codeeyay (Haa) 171 waxaa diiday 5 Xildhibaan, waxaana ka aamustay labo Xildhibaan, sidaas ayuuna ansax ku yahay” ayuu yiri Guddoomiyaha Golaha Shacabka.